Taageerayaasha 'Game of carshiga' waxay ku dhowaadeen inay Arya kula dagaallamaan jidkiisa Night King - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Taageerayaasha 'Game of carshiga' waxay ku dhaweyd inay daawadaan Arya oo u dagaallamaya jidkiisa Night King - BGR
Waxaa ka mid ah burburka weyn ee magacaabista Emmy Game of Thrones kasbaday (32 rikoor) kahor xaflada abaalmarinta bisha soo socota, mid ka mid ah waa dufcad loo yaqaan "Achievement Achievement in a Series Series" ee filimka ka dhacay Miguel's Bar Sapochnik, Habeenka dheer . Waxay dabcan ahayd mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee taariikhda carshiyo iyo qalalaasaha aan joogsiga lahayn ee Dagaalkii Qaboobaa ee sababay dhimashadii la yaabka lahayd ee boqorkii habeenki.
Sapochnik wuxuu shaaca ka qaaday wareysi cusub oo tafaasiil cusub ah oo ku saabsan goobta sumcadda leh ee ku saabsan Arya ugu dambeyntii soo afjari doonta boqorka da'da. Gaar ahaan, faahfaahinta qabow ee qayb ka mid ah goobta laga yaabo inay dhib ku hayso qaar idinka mid ah.
Waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda ah in Arya ay u muuqatay inay ka muuqato meelna, oo si tartiib ah hawada ugu dhex socota, xagga hubka. Boqorka habeenka, oo soo jeedsada, ayaa qabta oo ma arkaa dhaqsaha badan ee dagggiisa oo u gudbo gacanta ku dhow booska. Waxay soo baxday in shaqaalaha showgu runtii qorsheeyeen inay soo bandhigaan qaabka Arya ee dareenka ah ee Night Night, taas oo ku qasbi lahayd Arya inuu ku boodo saqafyo taxane ah. Caqiidada Aasaaska Markaad u socoto Godswood.
Isku xigxiggan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku haray qolka tifatirka sababtoo ah wuxuu umuuqday inuu carqaladeeyay "laxanka" goobta.
"Wax walba waan la tartamay oo waxaan si dheer oo adag uga shaqeeyay sidii aan u hanan lahaa isku dheelitirka saxda ah ee ka dhexeeya kalsoonida iyo rabitaanka guusha," ayuu yidhi. Reporter Hollywood The . Ka dib waanu u jeesanay oo dhul u leexanay oo waxaan ogaanay in laxankuna yahay waxa run ahaan la isbarbar dhigo.
"Hal mar waxaa jiray qorshe sifeysan oo loogu tala galay in ay ku aaddo geedka Weirwood, laakiin markii waqtigu sii socday, waxaan ogaannay in ay horayba u sameysay howshaas, sidaa darteed waxay u ahayd dib u tababar. Dhamaadkii maalinta, waxaan dareensanahay in jidkiisu muhiimad yar leeyahay - waxaa muhiim ahayd in la gaaro xilligii boqorka habeenki uu qabanayey nuskeed waxaan u maleynay inay iyadu dhameysatay, ka dibna waxay soo bixisay mindigeedii oo qaadatay banaanka. Waxaan sidoo kale jecelahay waxqabadka Maisie kadib bixitaankii, anigoo daqiiqad la wadaagaya walaalkeed, Bran. Dhoola cadeyntaan. Maanta maahan. "
Waa faahfaahin aad u weyn inaad haysato Sapochnik, mid ka mid ah saddexda agaasime ee showga Emmys bisha soo socota. Sapochnik wuxuu runtii noqon doonaa tartan adag oo la garaaco, isagoo sameeyay inta badan qaybaha ugu muhiimsan taxanaha marka lagu daro Night Long The oo ay ka mid yihiin Hardhome et Dagaalkii qadhaadhaa . Isagoo ka hadlaya Night Long The iyo muuqaalkaan aan la ilaawi karin ee Arya, jilaha ka ciyaara Night King ayaa had iyo jeer taageerayaasha u soo bandhiga waxyaabo aad u tiro badan oo ay ku qoraan bartiisa Twitter-ka, sida tweet-kii dhawaa iyo kan xiisaha lahaa ee ina dhigaya inaan dib u daawanno. wax walbana way bilaabmaan: